Maalinta Trump, Kaniisada Adduunka ee Switzerland (WKG)
Bishii Sebtember, Yuhuuddu waxay u dabaaldegaan Maalinta Sannadka Cusub "Rosh Hashana", oo macnaheedu yahay "madaxa sannadka" af Cibraaniga. Waa qayb ka mid ah dhaqanka Yuhuudda inay cunaan qayb ka mid ah madaxa kalluunka, oo ah astaanta madaxa sanadka isla markaana ay si wada jir ah ula socdaan "Leschana towa", oo macnaheedu yahay "Sannad wacan!" macnaheedu waa salaanta. Dhaqan ahaan, waxaa jira xiriir ka dhexeeya xafladda Rosh Hashana iyo maalinta lixaad ee usbuuca abuuritaanka, oo Ilaah ku abuuray nin.
Qoraalka Cibraaniga ee Laawiyiintii 3:23,24, maalinta waxaa loo bixiyay "Sikron Terua", oo macnaheedu yahay "Maalinta Xusuusta ee la afuufayo Trump". Tani waa sababta ay xuska maalintan loogu magac daray "Maalinta Trump" ee Jarmalka.
Rabbaaniyiin badan ayaa baray in Shofhir lagu afuufiyo Rosh Hashana ugu yaraan 100 jeer, oo ay kujirto taxane 30 jeer ah, si loo muujiyo rajooyinka imaatinka Masiixa. Sida laga soo xigtay ilo Yuhuudi ah, waxaa jira seddex nooc oo beep ah oo la afuuftay maalintaas:
Teki'a - Cod dheer oo is daba joog ah oo astaan ​​u ah rajada xoogga Ilaah iyo ammaanta in isagu yahay Ilaaha (Israa'iil) waa.
Shevarim - Saddex cod oo gaaban oo isdabajoog ah oo calaamad u ah qaylada iyo ka qaylida dembiyada iyo bini-aadamka dhacay.
Teru'a - Sagaal soon, codad qalqalloocsan (waxay la mid tahay dhawaqa qaylodhaanta qaylo dhaanta) si loo soo bandhigo qalbi jabka kuwa yimid Ilaah hortiisa.
Israa’iil hore waxay asal ahaan u isticmaashaa geesaha wanan. Laakiin waxyar ka dib, sida aan ka baranno nambarrada 4, kuwaan waa la afuufay (Trump) oo laga sameeyay lacag la beddelay. Isticmaalka turumbooyinka ayaa 72 jeer lagu sheegay Axdiga Hore.
Oo turumbooyinka waxaa loo afuufiyey feejignaan marka ay qatar ku jirto, oo loogu yeedho dadka inay wax isugu yimaadaan, oo ay ku dhawaaqaan ogeysiisyo, iyo sidii wacdin cibaadada. Waqtiyada dagaallada, buunka waxaa loo adeegsan jiray in askartu loogu diyaariyo hawlgalkooda ka dibna ay siiso calaamadaha hawlgallada dagaalka. Imaatinka boqorka ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay turumbooyin afuufa.
Maalmahan, Masiixiyiinta qaar waxay u dabaaldegaan maalinta buunka sidii maalin ciid ah oo leh adeeg waxayna isku daraan tan iyada oo la tixraacayo dhacdooyinka mustaqbalka, imaatinka labaad ee Ciise ama rayrayn kaniisadda.
Ciise waa muraayadda aan sida saxda ah ugu fasiri karno Kitaabka Quduuska ah oo dhan. Axdiga Hore (kaas oo ay kujirto Axdigii Hore) hadda waxaan ku fahmaynay muraayadda Axdiga Cusub (axdiga cusub, kaas oo Ciise Masiix uu si buuxda u oofiyey). Haddii aan u sii wadno amarka dib-u-celinta, waxaan gaarnay gabagabada, oo ku saleysan go'aanno qaldan, in Axdiga Cusub uu ku bilaaban doono oo keliya soo laabashada Ciise. Malo awaalkani waa khalad aasaasi ah. Qaar ayaa aaminsan inaan ku jirno xilli kala guur ah oo u dhexeeya axdiyadi hore iyo kan cusub sidaa darteedna ay waajib nagu tahay inaan xafidno xafladaha Cibraaniyada.
Axdigii hore wuxuu jiray si ku meel gaar ah oo keliya tanina waxaa ku jira maalinta loo yaqaan 'trombone day'. Isagoo leh, Axdi cusub ayaa kii hore ka dhigay mid duug ah. Laakiin wixii duugooba oo gaboobay ayaa u dhow dhamaadka (Cibraaniyada 8,17). Waxaa loo adeegsaday in lagu shaaciyo Masiixa imaatinka dadka. Buunka afuufaya Rosh Hashana ma aha oo keliya calaamadaha bilowga jadwalka dabbaaldegga sannadlaha ah ee reer binu Israa'iil, laakiin wuxuu sidoo kale ku dhawaaqayaa farriinta maalinta dabbaaldegga: "Boqorkeennu waa imanayaa!"
Ciidda reer binu Israa’iil ayaa ugu horrayn la xidhiidha goynta goynta. “Iiddii Kormaridda” iyo “Iiddii Kibista-aan-khamiirka-lahayn” ayaa markiiba la sameeyey ka hor iidda ugu horreysa ee iidda 'Iiddii Yarrow-ga koowaad'. Konton maalmood ka dib, reer binu Israa'iil waxay u dabaaldegeen Iiddii Goynta Hadhuudhka, "Bandhiggii toddobaadyada" (Bentakostiga) iyo xilliga dayrta dabaaldega weyn ee goosadka, "Bandhig Faneed". Intaas waxaa sii dheer, ciidaha waxay leeyihiin macno qoto dheer iyo macneed.
Aniga ahaan, qaybta ugu muhiimsan ee maalinta buunka ayaa ah sida uu u tilmaamo Ciise iyo siduu Ciise u sameeyay waxan oo dhan markuu ugu horreeyay. Ciise wuxuu dhammaystiray maalinta buunka, jidhkiisii, shaqadiisii ​​dib-u-heshiisiinta, dhimashadiisa iyo sarakicistiisa. Iyada oo loo marayo "dhacdooyinkaas nolosha Masiixa", Ilaah kaliya ma oofiyey axdigiisii ​​uu la dhigtay reer binu Israa'iil (axdigii hore), laakiin markasta isbeddelay weligiis. Ciise waa madaxa sanadka - madaxa, sayidkiisa waqtiga oo dhan, gaar ahaan maxaa yeelay wuxuu abuuray waqti. «Isaga (Ciise) waa suuradda ilaaha aan la arki karin, oo ah curadka ka hor abuuridda abuurka oo dhan. Maxaa yeelay, wax kasta oo jannada ku jira iyo waxa dhulka joogaba isagana lagu uumay, waxyaalaha la arki karo iyo waxyaalaha aan la arki karinba, inay yihiin carshiyo ama amarro ama xoog ama xoog. wax walba isagaa uumay oo isaga loo abuuray. Isaguna wuu ka sarreeyaa wax walba, oo wax walbana isagay ku jiraan. Oo isagu waa madaxa jidhka, kaas oo ah kaniisadda. Isagu waa bilowgii, curadka kuwii dhintayna, isagaa ugu horreeya wax kasta. Maxaa yeelay, Ilaah waa ku farxay inuu in kulli weyne isaga ku jiro oo wax walba isaga lagu hagaajiyo, ha ahaato dhulka ama jannada dhexdeeda, isagoo nabad kula samaynaya dhiigiisa iskutallaabta dusheeda. (Kolosay 1,15: 20).
Ciise wuu ka adkaaday meeshii Adam ugu horreeyay uu ku guuldareystay isaguna waa kii ugu dambeeyay. Ciise waa wankayaga Kormariddeenna, kibista aan khamiirka lahayn iyo dib-u-heshiisiinteenna. Waa kan (iyo mid keliya) oo naga saaray dembiyadeenna. Ciise waa sabtidayada, oo aan kaga nasanno dembiga.
Sidii Sayidku weligiisba, isagu haatan adiguu ku dhex jiraa adigana waad ku dhex jirtaa isaga. Waqtiga oo dhan ee aad la kulanto waa muqadas maxaa yeelay waxaad ku nooshahay nolosha cusub ee Ciise Masiix ee aad isaga la leedahay wadaagistiisa. Ciise waa Bixiyahaaga, Badbaadiyahaaga, Badbaadiyahaaga, Boqorka iyo Sayidka. Isagu buun buun buu sii daayay!